‘दाङलाई नमूना जिल्ला बनाउने अभियानमा छौ ं’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘दाङलाई नमूना जिल्ला बनाउने अभियानमा छौ ं’
‘दाङलाई नमूना जिल्ला बनाउने अभियानमा छौ ं’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता March 21, 2018	0 204 Views
जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख
दाङ प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण सुन्दर जिल्ला हो  । प्राकृतिक सुन्दरता र स्रो त साधनले सम्पन्न भए पनि दाङको विकासले खासै फड्को मार्न सके को छै न । विस् तारै विकास पहिल्याउदै गइरहे को दाङमा प्राकृतिक स्रो त साधनको अधितम प्रयो ग गरी दाङलाई समृद्ध र सक्षम जिल्लाका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । तर व्यवस् िथत यो जना र नीति निर्माण हुन नसक्दा प्राकृतिक स्रो त साधन दो हो नमै रित्तिदै गइरहे को छ । प्राकृतिक स्रो त साधनको अधिकतम उपयो ग, त्यसबाट हुने फाइदा, दाङको विकासका नया यो जना र स् थानीय तहबीचको आपसी समन्वयबारे जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जिते न्द्रमान ने पालीसग युगबो धकर्मी गिरिराज ने पालीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
जिल्ला समन्वय समिति दाङले के –के गतिविधि गरिरहे को छ  ?
हामी यो स् थानमा आइसके पछि यो जनाबद्ध तरीकाले काम सुचारु गरिरहे का छौ  । जस् तै सबभन्दा पहिले अध्ययन गरी समीक्षा ग¥यौ ं । अध्ययन गरिसके पनि बे रुजु असुल गर्ने क्रममा पाच करो ड जति बे रुजु असुल गरे का छौ ं । अर्काे तर्फ जिल्लाको विकासका लागि दशवटै स् थानीय तहबीचको समन्वय र आपसी छलफल गरिरहे का छौ ं । त्यसस“गै जिल्लाको विकास निर्माणलाई कुन मो डालिटीमा लै जाने , निर्माणाधीन विकास निर्माणका कामलाई कसरी तीब्रताका साथ सम्पन्न गर्ने भनी सबै तहबीच आपसी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी अगाडि बढिरहे का छौ ं । साथै दाङको एकीकृत विकासका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे दाङ जिल्ला विकास सल्लाहकार परिषद गठन गरी त्यसलाई अगाडि बढाउन प्रयत्नशील छांै  । साथै जिल्लाको विकासमा भइरहे को ढिलासुस् ती र बे थिति नियन्त्रणका लागि आपसी छलफलका साथ अघि बढिरहे का छौ ं । विकास निर्माणलाई कसरी छिटो छरितो गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे आपसी छलफल र विचार विमर्श गर्ने काम गरिरहे का छौ ं ।
स्थानीय तहहरुबीच समन्वयको भूमिका एको हो रो छ कि दो हो रो , कस्तो छ ?
स् थानीय तहहरुबीच काम गर्दै जा“दा यदाकदा त्यस् तो पनि हुनसक्छ । तर जनप्रतिनिधिहरु आइसके पनि साँविकको जिल्ला विकास समिति समन्वय समितिको भूमिकामा आएपछि हरे क तहबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहे का छांै  । स् थानीय तहहरुले कतिपय बे ला चाह“दा चाह“दै पनि नहुनसक्छ । सके जति दो हो रो समन्वय गर्ने प्रयासमा हामी प्रयत्नशील छौ ं । छुटपुट भएका कुरामा समीक्षात्मकढंगले अघि बढिरहे का छौ ं । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउ“पालिकाका प्रत्ये क क्षे त्रमा सूचक निर्माण गरी अघि बढिरहे का छौ ं । के ही ठाउ“मा बा“की छ । तर स् थानीय तहका प्रत्ये क वडा–वडामा विकास निर्माणको पहिचान र आपसी समन्वयको वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढिरहे का छौ ं ।
स्थानीय तहका काम एकलौ टी भएजस्तो दे खिन्छ नि ?
स् थानीय तह स् थानीय सरकारका रुपमा स् थापित भइसके पनि स–साना कुरामा पनि हामीबीचको समन्वयबाटै अघि बढिरहनुपर्छ भन्ने कुरा छै न । के ही काम गर्दा आफै ले पनि गर्न सक्छन् । तर जिल्लाको सम्रग विकास निर्माणका लागि त्यस् तो छै न । स् थानीय बीचको समन्वय नै हाम्रो काम कर्तव्य रहे काले आपसी समन्वयको बाटो हामीले दे खाउने समस् या पहिचान गर्ने समाधानको साझा बहसको वातावरण निर्माण गरी विकासलाई अघि बढाउने काम हाम्रो हो  । अझ भनौ ं स् थानीय तहबीच विकास निर्माणमा दे खिएका समस् याको समाधानको बाटो निकाल्ने प्रयासमा हामी रहन्छौ ं । त्यसको अनुगमनको बाटो लाई नियाल्दै राम्रो कामलाई प्रो त्साहन नराम्रो कामलाई गलत भनी प्रश्न गर्न सक्छौ ं । दाङको विकास निर्माणमा हाम्रो समन्वय दुईपक्षीय छ । भर्खरै मात्रै को इलाबास सडकको अनुगमन गरे र फर्कियौ ं । त्यहा“ के ही समस् याहरु रहे छन् । के ही कानून बनँई सम्वो धन गर्नुपनेर् कुराहरु छन् । के ही स् थानीय तहबाट समाधान गर्न सकिन्छ । ती सबै कुराहरुलाई व्यवस् िथत तरीकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन अझै अस्तव्यस्त छ नि ? कि तपाइहरुबीच कर्मचारी व्यवस् थापनमा समन्वय छै न  ?
कर्मचारी व्यवस् थापनमा के ही समस् याहरु अझै छन् । जसका कारण स् थानीय तहको कामकाज र नागरिकहरुको से वा सुविधामा के ही असुविधा भएको छ । जिल्लामा पर्याप्त कर्मचारी नहु“दा पनि यो समस् या दे खिएको भन्न सकिन्छ । तर जिल्लामा जति जनशक्ति छ उति नै काम बा“डफा“ड गरिएको छ । स् थानीय तहको क्षे त्र, जनसंख्या र भूगो लको आधारमा जिल्लामा कर्मचारी व्यवस् थापन गरिएको छ । तर कतिपयमा कर्मचारीहरु जान नमान्दा समस् या छ भने कतिपय क्षे त्रमा दिएको कर्मचारी पनि स् वीकार गर्न नसके को अवस् था छ । कर्मचारी व्यवस् थापनका सवालमा सबै तहहरुबीच आपसी छलफल गरी कुन क्षे त्रमा कस् तो र कति कर्मचारी आवश्यक हो, त्यसमा गहन छलफल गरी कर्मचारी व्यवस् थापनको समस् या तत्काल समाधान गर्ने प्रयासमा हामी लाग्ने छांै  । अर्काे कुरा स् थानीय तहमा कर्मचारी दिन नसके को अवस् था पनि छ । तर हामीले सबै क्षे त्रमा आवश्यक कर्मचारी मिलान गरी समस् या हटाई सुुविधाको खो जी गर्ने छांै  ।
प्राकृतिक स्रो तको दो हो न बढ्दो छ । चो री पै ठारी नियन्त्रणका लागि कस् तो प्रयास छ ? स्थानीय तहहरुले आफै ठे क्का प्रणाली शुरु गरे का भन्ने सुनिन्छ नि ?
पहिलो कुरा हामी निर्वाचित भए पनि नदीजन्य वस् तुको उत्खननका बारे मा नियम कानूनबारे जानकारी लिन अलि समय लाग्यो  । त्यसबे ला अनुगमनको पाटो पनि फितलो भयो  । जसले गर्दा चो री निकासी बढे को थियो  । सबै स् थानीय तह र सरो कारवाला पक्षहरुबीच चो री पै ठारी नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सबै सरो कारवाला पक्षहरुबीचको छलफलपछि अनुगमनको पाटो लाई चुस्तता दिने सहमतिपछि हामीले अवै धानिक उत्खनन नियन्त्रणका लागि अहिले सबै क्षे त्रमा चुस् तताका साथ काम गरिरहे का छौ ं । प्राकृतिक स्रो त साधनको अबै ध चो री पै ठारी नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले खो ला र वन आफै अगुगमन गर्दै आइरहे को छ । हिजो आज जिसस दिनह“ुजसो नदीजन्य उत्खनन, चो री पै ठारी नियन्त्रणका लागि स् थानीय तहहरुको समन्वयमा अनुगमनलाई निकै चुस् तता दिएको छ । त्यसमा स् थानीय तहहरुको सहयो ग पनि निकै छ । नदीजन्य पदार्थको चो री पै ठारीले लाखौ ं रुपै या“ राजस् व ह्रास हुने भएकाले तततत् स् थानमा स् थानीय तहहरुबीचको आपसी समन्वयमा वै धानिकता दिने र चो री शिकारलाई निर्मुल गनेर् हाम्रो प्रयास अथक छ । जुन तपाईले भन्नुभयो स् थानीय तहहरुले आफै ठे क्का खो ल्न शुरु गरे का छन् भन्ने कुरा त्यसो े है न ।
जिल्ला समन्वय समितिमार्फत नै नदीजन्य वस् तुको उत्खननको काम गरिएको छ । हामीले के ही खो लाहरु उत्खननका लागि वै धानिकता दिएका छौ ं । त्यो सबै क्षे त्रको समन्वयले नै भएको हो  । तर के ही क्षे त्रको अगुगमनका क्रममा क्रसर उद्यो गहरुले नियमविपरीत उत्खनन गरिरहे को पनि भे टाइयो  । त्यसलाई पनि कानुनी परामर्शका साथ आगामी दिनमा त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै क्रसर उद्यो गहरु तत्काल रो क्न निर्दे शन दिइसके का छौ ं । क्रसर उद्यो गहरु पुरानो संरचना हुदा घरे लु कार्यालयमा मात्रै दर्ता भए पुग्ने , वातावरण सम्भाव्यताको अध्ययन नगरे पनि उद्यो ग स् थापना गनेर् जस् ता कुरा अनुगमनमा फे ला परे का छन् । अहिले हामीले स् थानीय तहसगको समन्वयमा क्रसर उद्यो गहरुलाई व्यववस् िथ गर्न निश्चित मापदण्डहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि निर्दे शन गर्ने छांै  । कतिपय उद्यो गहरु नियमविपरीत सञ्चालन भइरहे काले अब त्यस् ता उद्यो गहरु तत्काल मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन गराउने प्रयास गर्ने छांै  । जसका लागि हामीले जिल्ला प्रशासनको पूर्णअधिकारको प्रयो ग गरी त्यस् ता उद्यो गहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने छौ ं । नदीजन्य वस् तुको अबै ध चो री निकासीलाई पूर्ण निषे ध गर्ने छौ ं । चो री निकासी नियन्त्रणका लागि हामीले स् वीकृतिस“गै उत्खनन क्षे त्र निर्धारण गर्दै साइन बो र्डको व्यवस् था गरी स् थान पहिचान गराउन पनि अहिले हामीले सम्बन्धित पक्षलाई निर्दे शन दिएका छौ ं । त्यो अधिकाश ठाउ“मा लागु भएको छ । जसले गर्दा चो री निकासी विस् तारै घटे को भन्न सक्छौ ं ।
अबको पाच वर्षमा दाङ कस्तो बनाउछांै भन्ने सो च छ ?
दाङको विकासका लागि हामी वृहत् यो जना निर्माण गरी अघि बढ्ने सो चमा छांै  । हरे क क्षे त्रका विज्ञहरुस“ग छलफल गरी कृषि, पर्यटकीय एवं धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा विकास, वन सम्पदाको संरक्षण तथा विकास, भौ तिक विकास र नागरिक से वा सुविधाका विषयलाई पनि कसरी अधितम विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारे विभिन्न विज्ञहरुस“ग छलफल जारी नै छ । जसले दाङको विकासका लागि निकै सघाउ पु¥याउने छ । दाङको एकीकृत विकास गर्न दाङ जिल्ला सल्लाहकार परिषदमार्फत हामीले दाङको वृहत् यो जना निर्माण गरी नमूना जिल्ला बनाउने अभियानमा छौ ं ।
जसका लागि हामीले २÷३ वटा बै ठक सम्पन्न गरी जिल्लाका यो जनाहरु निर्माण गरिसके के ा छौ ं । जस्तै नारायणपुर क्षे त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस् थल, रिङरो ड निर्माण, कृषि क्षे त्र
निर्धारण र खाने पानी क्षे त्रको विकासका लागि हामीले विभिन्न छलफल गरी बृहत यो जनाको खाका तयार पारी के ही काम अघि बढाउने प्रयासमा छौ ं । त्यस् तै दाङ जिल्लामा अव्यवस् िथत बसो बास गर्दै आइरहे का विपन्न समुदायको व्यवस् िथत वस्ती निर्माण, हरियो वन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रर्वद्धनात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छौ ं । नागरिक अधिकार र से वाको कुरामा पनि हामीले वृहत यो जना
निर्माणका साथ काम गर्ने संकल्प लिएका छौ ं । सीमा नाकामा वा पहाड क्षे त्रमा बसो बास गरे का नागरिकहरुको आयस्तरमा सुधार, शिक्षा स् वास् थ्यको आधारभूत आवश्यकता सम्वन्धमा विकट क्षे त्रमा विशे ष कार्यक्रमको विकास गर्ने , दाङमै चिकित्सा अध्ययनको विकास गरी स् वास् थ्य से वामा पनि दाङलाई समृद्ध र सक्षम बनाउने अबको नया यो जना छ । हुन त पाच वर्षमा यी सवै कुरा पूरा नहो लान् तर शुरुवात गरे कामले निरन्तरता पाउछ कि भन्ने लागे र हामीले दाङको विकासका लागि वृहत यो जना परिषद् गठन गरे का छौ ं । त्यस्तै स्थानीय घरे लु उद्यो गको विकास गरी गाउ“मुखी स् वरो जगारको विकास गर्ने घरघरै रो जगारी सिर्जना गरी कृषि क्षे त्रको प्रवद्र्धनात्मक यो जना ल्याउने , किसानहरुलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस् थापन गरी कृषि क्षे त्रको विकास गर्न सकिने छ । त्यस् तै स् मार्ट सिटीको अवधारणामार्फत दाङको शहरी क्षे त्रको विकास गर्न सकिने छ । जिल्लाको घो राही, तुलसी र लमही बजारलाई आधुनिक स् मार्ट शहरका रुपमा विकास गरी नमूना दाङ बनाउन सकिने छ । अन्त्यमा हाम्रो रहर समृद्ध गाउ“ शहर भन्ने अबको यात्रामा सबै को समन्वयात्मक भूमिकाका साथ अगाडि बढौं, मुलुक आर्थिकरुपमा सक्षम हुन सक्छ ।
अन्त्यमा राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दे खिएको विवाद समाधानका लागि कस् तो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ ?
राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुन विवाद दे खिएको छ त्यसको समाधानका लागि नागरिक समाजदे खि अन्य सरो कारवालाहरुस“गको आपसी समन्वय, परामर्श र छलफलको काम जारी राखिराखे को छु । आइतवार मात्रै नागरिक समाजसहित छलफल चल्यो  । छलफलबाट दुई दिनको समय माग गर्दै अस् पताल हस् तान्तरणको विषयमा विषयगत मन्त्रालयसग समन्वय गरी समस् या समाधानका लागि निकास खो ज्ने प्रयास गरे का छांै  । प्रतिष्ठानको समस् या समाधानका लागि समन्वय काम भइरहे को छ । मंगलवार मात्रै प्रतिष्ठानको विवाद समाधानका लागि सर्वपक्षीय छलफल गर्ने समन्वय गरे को छु । स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम रो किदै न । समन्वयका काम भइरहे काले चा“डै निकास निस् कन्छ ।
Previous: पाँच रो पनी जग्गा दान
Next: ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र प्रदान